FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alahady 09 Martsa 2014
Toriteny Alahady 09 Martsa 2014
Natao ny 12 Mar 2014, Pasitera: Atoa RAKOTONDRASOA Harijaona
Nomery.14 , 11 – 19
Lioka.4 , 1 – 13
2 Kor.5, 11 – 15
Lioka.4 , 1 – 13 no raisina handraisana hafatra ho antsika amin ity alahady voalohany amin ny Karemy ity. Vani.potoanan ny Karemy ahafahantsika mandinika, misaintsaina ny fitiavan Aa antsika izay notanterahiny tamin ny nanomezany an i JK ilay nanolotra ny ainy ho famonjena antsika. Efa namonjy antsika ny Tompo, resiny ny fahotana sy ny herin ny fahafatesana, tarihina handinika tena isika ahatsiaro izany. Tena mitoetra amin ny famonjena nataony ve isika sa mbola milona amin ny fahotana. Tena mpandresy sa resy. Raisina ary izao teny izao mba ahatonga antsika hitoetra amin ny famonjena sy ho, mpandresy mandrakariva
1. Miombom.piainana amin Andriamanitra mandrakariva
2. Mivelona amin ny Tenin’Andriamanitra
1. Miombom.piainana amin’Andriamanitra mandrakariva
Voalaza eto fa Feno ny Fanahy Masina ny Tompo ary nentin’ny Fanahy Masina tany anefitra. Araka izany Jesoa Kristy manana ny Fanahy Masina tao anatiny . Tena feno ny Fanahy Masina no hitantsika eto. Fiombonana @ Aa izany sady fanekena hotarihina amin’izay itondran’ny Fanahy Masina Azy.
Tany an’efitra nifady hanina efa.polo andro sy efa.polo alina araka ny Matio.4. Fitokanam.bavaka, fifandraisana lalina tamin’ Andriamanitra . Nofoanany ny tenany fa ny fiombonana tamin Aa no nomeny lanja bebe kokoa.
Vokany na dia niezaka nanelingelina azy aza satana dia resy tosika, niala maina fa tsy nahalavo Azy . Afaka, nandresy ny faka.panahy Izy. Mandresy ny faka-panahy, mandresy ny faminganana ataon’i satana miombom-piainana amin’Andriamanitra eo amin’ny fiatrehana ny fiainana.
Ry havana malala, fianarana ho antsika ny Tompo teo amin’ ny fiatrehana ny fiainana. Zanak’ Andriamanitra nalaim- panahy Izy. Nandresy noho ny fiombonana fiainana tamin’ Andriamanitra Rainy. Maro ny fingana ataon’ ilay ratsy, maro ny fakam panahy manodidina antsika. tsarovy fa izay tsara fiombonana amin’ Andriamanitra irery ihany no hivoaka ho mpandresy
Tsarovy fa Jesoa Kristy nananatra ny mpianatra miambena, mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ny fakampanahy
Miharihary eto ihany koa fa fitaovana nentin’i Jesoa Kristy nandresy an’i satana ny Tenin’Andriamanitra izay niainany, nivelomany. Ny Tenin’Andriamanitra hatrany tokoa mantsy ny navaliny ireo fakam-panahy nataon’i satana Azy.
Miseho eto tokoa mantsy fa izay toe-javatra mahaliana sy mahamaika ny olona no idiran’ilay satana handavoana ny olona : filana andavan’andro ( noana ), te-hiova tontolo, mitady harena sy voninahitra ( anehoany tontolo kanto, Gen.3, 4 ), fianteherana amin’ny herin ny tena ( zanak’Andriamanitra, fitsapana ny hery sy fahefan’ Andriamanitra eo amin ny tena )
Tarihin satana ho @ fireharehana sy ny fizahozahoana Izy ( Zanak Aa )
Maka fanahy satana, ny tanjony dia ny handavo ny olona, handatsaka ny olona amin’ny tontolo fandavana an’ Aa.
Na dia izany aza dia ny Tenin’ Andriamanitra no navalin’ny Tompo tamin’ ireo faka.panahy rehetra nataon’ i satana.
Nifanaraka tamin’ ny ady natrehany, ny nakana fanahy Azy ny Tenin’ Andriamanitra nampiasainy.
Tena niainan’ ny Tompo ny Tenin’Andriamanitra ka tsy nahavoa Azy ny fingana, famitahana nataon’ i satana.
Nandresy ny Tompo noho ny fiainany ny Tenin Aa. Nanadanja tao Aminy ny Tenin’Andriamanitra ka nolaviny, notoheriny ny teny nataon’i satana rehetra. Tsy lavon’ny fahotana Izy.
Ry havana malala, fianarana ho antsika tokoa ny Tompo, mandresy, afaka, voavonjy amin ny fahotana izay rehetra manana ny Tenin’Andriamanitra ka mivelona amin izany. Rehefa ataontsika ho manandanja eo amin’ny fiatrehantsika ny fiainantsika ny Tenin’Andriamanitra dia tsy afaka handavo antsika ny ratsy. Afaka mandresy ny fakam-panahy samihafa aroson’ny satana isika.
Tsarovy olona tsy manana, na tsy mivelona amin’ny Tenin’ Andriamanitra no mora lavon ny fahotana.Tsarovy ny toe.jvt niainan ny Adama sy Eva. Eny olona maro ihany koa .
Raiso, ampiaro eo amin’ny fiatrehanao ny fiainana ny Tenin’Andriamanitra dia ho mpandresy mandrakariva ianao. Amena